Magazay etsy Behoririka : Jiolahy misaron- tava roa tratra ambodiomby
Magazay iray eo Behoririka indray no saika lasibatry ny jiolahy afak’omaly. Nanana ny fanalahidy afaka namoha ny varavarana mihitsy ireo jiolahy, ka tafiditra tao amin’ilay magazay nialoha ny tompony.
Mbola teo am- pikenokenonana anefa izy ireo no tonga ny tompon- trano ka niantso vonjy. Tsy lavitra teo ny polisin’ny Gir ka niditra an- tsehatra avy hatrany. Efatra no sarona tamin’ireo olon- dratsy.
« Tokony ho tamin’ny 9ora maraina no nisy olona roa nanao saron- tava niditra tao amin’ny magazay. Nifanenjehinan’ny polisin’ny Gir ireo jiolahy roa ireo, saingy nitsoaka ihany. Nanapohana basy fa lasa ihany. Tratra ihany anefa izy ireo rehefa nisy nanampy ny polisy. Tamin’ny famotorana azy ireo no nahafantarana fa olona roa no nanao ny lakilen’ilay magazay ka nahafahan’izy ireo niditra an- tsokosoko. Vehivavy mpiasa tao amin’ity magazay ity taloha kosa no nanoro ny mombamomba ny magazay rehetra », hoy ny avy ao amin’ny polisim- pirenena.
Vao erotrerony avokoa ireo jiolahy, satria 33 taona no zokiny indrindra. Randrianasolo Lalaina, 24 taona ny iray. Razafimahatratra Fidimalala Jacquot kosa ny faharoa izay 33 taona. Randrianandrasana Tovoniaina Jeannot sy Heriarisoa Hajatiana no farany. Manodidina ny 20 taona avokoa izy roa lahy ireto.
Eo am-pikarohana ilay vehivavy tompon’antoka tamin’ity fanafihana ity ny polisin’ny « Sut » etsy Tsaralalàna, izay miandraikitra ny famotorana ny raharaha.